Turkish TV ewuchungechunge "Asi": ukubuyekezwa, sakhiwo, abadlali kanye izindima
Omunye kusukela ethandwa kakhulu Turkish ifilimu serial, eyakhululwa ngo-2007, baba ochungechungeni "Asi", okuyinto libuyekeza etholakala kakhulu evumayo. Umqondisi leteyipu kuyinto Cevdet Mercan, futhi indima esemqoka kulo wahlabelela abadlali Turkish Tuba Byuyyukyustyun futhi Murat Yildirim. Le filimu Yiqiniso, intandokazi abalandeli Turkish uchungechunge TV ngokuthi "Century Ezinhle" nesithi "uthando futhi Ziyisijeziso".
Kungokwemvelo ukuba labo ezibukelini uke wazibona labo amabhayisikobho, njengoba intandokazi movie entsha ye-serial Ngingathanda ukubona imfanelo enhle shot uchungechunge mayelana nothando. "Asi" kwaba ifilimu ezinjalo. Futhi ngenxa yalesi sizathu, cishe kusukela uchungechunge sokuqala kwathonya ezinkulungwane izibukeli.
Uchungechunge oluthi "Asi": Izibuyekezo, sakhiwo
Yiqiniso, njengasezindaweni eziningi Turkish uchungechunge TV, itulo amanga imizwa yothando oluphakathi kwendoda nowesifazane. Futhi-ke, imithetho amafilimu Turkish, ubudlelwane kungase kungabi kulula. Abantu abasha endleleni eya enjabulweni has okunqoba izithiyo eziningi.
Ngo izinkundla ezihlukahlukene, okubuyayo ku ochungechungeni "Asi" ishiywa kakhulu abathandi Awama-Melodrama eside. Labo ungathandi eside ewuchungechunge, babhala ukuthi lena ngenye uchungechunge nge indaba ezinde kanye nentuthuko okunengqondo esizayo. Kodwa abathandi izindaba mayelana uthando enqobayo, okuyinto isendleleni okunqoba izithiyo eziningi, kunalokho, bajabula ngokukhululwa kulombukiso.
A indzaba lemfisha amafilimu
I lwendaba ligcinwe ubuhlobo Intombazane okuthiwa Asi Demir nesithandwa sakhe. ubuhle Young selikhule endaweni eyayithengwe umndeni wakhe kulo izizukulwane ngezizukulwane. Ubaba wentombazane uneminyaka ngesikhathi enqaba imfundo diploma ngoba waphoqwa ukubhekana kulondolozwe ezweni. Njengengubo nje uyise, u-Asi ngokokuziphatha kakhulu linamathele mizi. Uma ezisebenza emkhakheni, lihlangabezana a handsome insizwa Demir, futhi phakathi uyavuka ukuzwelwa.
Ukufa okuyimfihlakalo unina protagonist
Demir ekuqaleni wayecabanga ukuthi wayebhekane nesimo isisebenzi babesebenza epulazini. Asi yayilula kakhulu ukuthi wayengeke akwazi ngisho nokuthola wayecabanga ukuthi uyilowo - indodakazi umnikazi wendawo. Weza le ndawo, nale izizathu onohlonze.
Uma kwakukhona kanina, owayesebenzisa wafa ngaphansi kwezimo engaqondakali. Demir kwaba ngaleso sikhathi usemncane kakhulu. Yena wazibulala, futhi manje indodana omdala wanquma ukuya emuva futhi uthole ukuthi yini kwaba imbangela.
Ngemva iziqephu ezimbalwa kuba sobala ukuthi umndeni Asi kuhlobene unina eshona amthandayo. Lesi simo kakhulu inkimbinkimbi ubuhlobo babo futhi ukuphuca nengxabano uzizwa ngokusekelwa abangane nezihlobo kubo abantu.
impendulo engeyinhle ochungechungeni
Kasibili iyiphi ibhayisikobho ngemva kokubuka kubangela izethameli imizwa ehlukene kanye nezimpendulo. Uchungechunge oluthi "Asi" (2007 ukukhululwa yeshashalazi) kwaba okufanayo. Wathola izilaleli zakhe eziqotho futhi njalo, kodwa kukhona nalabo ababethi umbukiso akuyona enhle noma kusukela lokwentiwako, kungaba ngekulandzela ngokubhala emgqeni indaba. Ezinye izilaleli phakathi nengxoxo yaphawula ukuthi emigqeni indaba ochungechungeni Friend ikakhulukazi. Lena kwaphawuleka ngokukhethekile ochungechungeni lokuqala.
Uchungechunge oluthi "Asi" (okuyinto libuyekeza lonke kwande positive) Ngezinye izikhathi abanye begxeka lo nokubikezela yomugqa wendaba, okuyinto isici okufana ogawuthola lyrical. Ngokwesibonelo, kuba sobala ukuthi protagonist futhi Heroine nje ukuthandana nomunye. Endleleni eya enjabulweni yabo ngokuhlanganyela kufanele uthole okuningi yakudala izithiyo uhlobo: feuds umndeni, impahla ezahlukene futhi isimo sabo emphakathini, futhi izimfihlo ubudala ngokucophelela izimfihlo kufihlwe okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo.
Futhi-ke, ngo-imiphefumulo yokugcina othandekayo luhlanganise ngempela, okufuze zonke izithiyo. Asi kanye Damir ukudlala lomshado. Ezinye isiphetho zazingase zibonakale isidina, banal futhi ungakujabulisi.
Abalingisi kanye Ifaka
Uchungechunge oluthi "Asi", ukubuyekezwa esebenza lapho ngokuvamile akhayo, bebuthene isethi kwabo abadlali abanolwazi, kodwa hhayi ngempela eyaziwa umphakathi. Isigaba sokuqala kungaba ngokuphepha kuchasiselwe phambili besilisa - Murat Yildirim.
Ngaphambi kokuba izinkanyezi ku "Asi", izilaleli ithuba ukuhlola oyibamba umsebenzi wakhe uchungechunge ezifana "Purgatory", "Amanga Big" nesithi "Tempest." Ukuze umsebenzi wakhe ochungechungeni yokugcina yena yanikezelwa i Murat zokuhlonipha eTurkey Movie Awards "Golden Orange". Ubufakazi bokuthi umvuzo esebenza Murat wanikezwa awulona ize, baba show yakhe elilandelayo - "Asi". Ukubuyekeza, ukubuyekezwa komsebenzi leteyipu Murata kuqashelwe ukuthi umlingisi ngokuphelele owawusekelwe ukuphila umfanekiso owesilisa kunalokho xaka.
ukuguqulwa ngocansi kahle umlingiswa oyinhloko
Kulokhu, ezinye Izibuyekezo wawuthi "Asi" kuboniswa hhayi njengoba isithombe eziyinkimbinkimbi Demir, njengoba ukuguqulwa bobuntu bakhe kulo lonke uchungechunge. Ekuqaleni, kubonakala umfana kwezinsana ezisemadolobheni, akakwazi ukuzenzela izinqumo njalo. Kwezinye izimo, kubonakala ababuthakathaka: bakholwe inhlebo, ubalekela izinkinga esikhundleni nokuzixazulula.
Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, kuba sihluke kakhulu uhlamvu - umoya onamandla yomuntu futhi uyazethemba indoda okwaziyo ukuhlangabezana nezinselele zokuphila futhi uzinqobe. Futhi, ukulungele ukulwela owesifazane akuthandayo, udlale indima enkulu actress Turkish Tuba Byuyyukyustyun. Asi ekusebenzeni yayo kusukela uzimele wokuqala kunikeza umbono Nokho ethambile ngokubukeka, kodwa uqine kakhulu emantombazaneni. Kufanele sivume ukuthi uchungechunge "Asi", ukubuyekezwa zazo zikhona ezahlukene, ukukhethwa abadlali ukuze izindima ehola babhekana esihle.
Murat Yıldırım, odlala Demir, akuyona kuphela ababhekwa njengenkolo umlingisi abanamakhono. Ngo ezweni lakubo, nabomalukazana babo nabo bangena uhlu nabalingisi Turkish enhle kakhulu 10. Kodwa akekho kungenzeka ekuqaleni bazitshela ukuthi guy handsome ngibe usaziwayo hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa lonke Turkey, kodwa futhi umlingisi liyabonakala emhlabeni, njengoba esemusha, Murat waba nokuthambekela ezinhle kakhulu umthwalo kwezesayensi okuhloswe ukuthuthukisa ngokwabo kulesi siqondiso.
Lo mlingisi esizayo wazalelwa emzini Turkish of Konya ngo-April 1979. Kuyaziwa ukuthi lo mfana wakhulela emndenini yengqondo ebhaliwe, futhi ngaphandle kwakhe, abazali nginamadodakazi amabili ngaphezulu. Uyise wayeyithanda kakhulu kahle ukufunda futhi wafundiswa. Wafundisa izincwadi futhi wayenesithakazelo yaseshashalazini. umama Murat sika - Hayat - futhi wayengowesifazane ufundile futhi wafundisa izilimi zaseMpumalanga. Ngemva kwesikole, le nsizwa kuhanjiswe ku Istanbul futhi wayezimisele ukuya omunye iyunivesithi zobuchwepheshe emkhakheni wobunjiniyela.
Murat wafunda kahle, futhi ngemva kokuthweswa iziqu, wathola i-diploma in ifayela eliwumthombo. Nokho, lokhu akusho kumvimbe lokuba umfundi ukuze uthole ukucula ujabule nokwenza. Murat kancane kancane waqala iqhaza imikhiqizo umfundi yaseshashalazini qembu, futhi ngemva kokuthweswa iziqu ngo-eminyakeni emithathu ezayo wenza yaseshashalazini amateur. Ngokuhamba kwesikhathi, lapho abanye bakuqaphela abaqondisi, yaqala ukunikela izindima abanamakhono handsome okuholela movie. 2003 I-Murat kwaba yimpumelelo futhi ithele. Wabonakala esikrinini ngesikhathi esisodwa kumafilimu ezintathu, kanye nomphakathi jikelele baqala ukukhuluma ngakho.
Umlingisikazi Tuba Byuyyukyustyun - abadlale ehola indima yabesifazane
"Asi" - a-Turkish uchungechunge TV, ukubuyekezwa zazo zibangelwa ukusebenza qualitative abadlali. Lokhu sokunconywa kungokwalabo Tuba Byuyyukyustyun, owesifazane Turkish futhi emuhle, ababedlala kulolu chungechunge indima yabesifazane main.
Wazalelwa inhlokodolobha Turkish ngo-1982. Kusukela ebuntwaneni, intombazane onobuqambi o-creative, wayeshaye phansi kahle umdwebo. Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme, lapho nginqumile umsebenzi wabo wesikhathi esizayo, Tuba wangena Turkish Art University. M. Sinan, futhi waqala ukutadisha at umklami isethi futhi imvunulo umklami.
Ukuthandwa actress, ababedlala Asi
Ubuhle baleli intombazane Kunzima kakhulu miss, nalapho Tuba wayengumfundi wesazi wazithola iziphakamiso eziningi ezilingayo ngokudubula ekukhangiseni. Le ntombazane yayingazi ukuthi abalenqabayo futhi ngolunye usuku yabona ukuthi wathola umnikelo ovela sha edumile emhlabeni Pantene. Ngemva Turk ezweni lakubo isibe ubuso sha, ke kwaqashelwa ngomunye wabaqondisi - Tomris Giritlioglu. Kwakuwusuku okokuqala wanikela intombazane ukuzama isandla sakhe njengomdlali waseshashalazini, ngakho Tuba wangenela esikrinini blue ngo-2007, Starring ifilimu adumile "Sultan Macs." izipesheli Eceleni inkanyezi kumabhayisikobho zaqala ukutheleka intombazane ngaphandle kokuphazamiseka.
Kungaba okungalungile bathi kwayo hola actress sibonga eyigeza. Le ntombazane uyisisebenzi esikhuthele kakhulu, futhi abaningi bathi ayinaye esebenza ithalente. Phakathi ukudlala indima movie "Gyulizar" ngo-2005, wathola isihloko actress best konyaka. Kuze kube manje, lo Tuba ingenye ethandwa kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, efunwa ngabakwa labaqondisi actress Turkish engesiyo kuphela ekhaya kodwa emhlabeni wonke ezaziwa.
Edmar Tully - umlingisi yochungechunge "Game of Thrones"
Alexander Mitta: Biography, Filmography, empilweni yakho
Misty - uhlamvu "Pokemon": edume kunazo intombazane-Umqeqeshi we anime-Japanese
Rheumatism - Siyini ngempela lesi sifo?
Yezokwelapha, izincomo Bile isicelo
Uyini Indwangu kangcono zokulala. Izinhlobo kanye nezici izindwangu for zokulala
Zokupheka Simple yehlela Inkukhu izinhliziyo
Grouting "Mapey" (Mapei) I-tile: izici